Gcwalisa iselula ngekhadi ngokushesha futhi ngaphandle kwezihibe - Gcwalisa iselula
Uma uphelelwa ibhalansi kuselula yakho, into yokuqala oyicabangayo ukuthi ungeza kanjani imali kulayini wocingo lwakho. Ukushaja kabusha iselula ngekhadi kungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu zokwengeza imali ocingweni lwakho ngokushesha nangokushelela.
Izinkampani zomakhalekhukhwini ezihlukene ezikhona emhlabeni wonke, zikhokhisa kabusha ngamakhadi esikweletu, amakhadi edebhithi kanye namanani akhokhelwe kusengaphambili. Ongakusebenzisa ukwengeza ibhalansi kuwebhu noma ngokuqondile ku-opharetha wakho weselula.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungasebenzisa kanjani amakhadi akho asebhange ukuze ushaje, hlala nathi futhi sizokuchazela ngakho lapha. Ukwengeza, sizokutshela ukuthi ungasebenzisa kanjani amakhadi akhokhelwa ngaphambili ukushajwa kabusha kweselula. Ungahlali ungakhulumisani ngenxa yokushoda kwebhalansi.
Ukushajwa kabusha kweselula ngamakhadi asebhange
Ngokusebenzisa amakhadi akho edebhithi noma esikweletu ungakwazi ukushajwa kabusha ibhalansi yakho ku-inthanethi ngocingo lwakho, kusukela kukhompuyutha yakho noma kumakhalekhukhwini wakho., ngokubhalisa emakhasini amaningi ewebhu akhona noma ngokudawuniloda i-App yezinkampani ezishaja kabusha ezihlukene ezinale sevisi.
Amanye amabhange anesevisi yokushajwa kabusha ngama-ATM, lapho ungakwazi ukushaja kabusha iselula yakho ngokuphephile ngekhadi. Ungayeki ukusizakala ngamakhadi akho asebhange futhi uhlale uthintana.
Gcwalisa imali ku-inthanethi ngamakhadi asebhange
Sebenzisa ikhompuyutha yakho noma i-smartphone ukuze ushaje kabusha ngamakhadi akho asebhange. Uma ufuna ukushajwa kabusha iselula yakho ngekhadi, kunezinkampani ezihlukene ze-inthanethi ezihlinzeka ngale sevisi.
Ukuze ugcwalise kabusha ikhompuyutha yakho, faka igama lenkampani yocingo esebenzisa umakhalekhukhwini wakho noma igama lekhasi lewebhu elihlotshaniswa nezinsiza zokushajwa kabusha enjinini yakho yosesho. Ezinye ezisetshenziswa kakhulu yilezi: ding, udokotelasim, ukushajwa kalula, WorldRemit, ifonemali, phakathi kokunye.
Into yokuqala okufanele uyenze ngemuva kokukhetha inkampani yokushajwa kabusha ukubhalisa kuwebhusayithi yabo. Ngefomu faka izwe, inombolo yakho yocingo, inani lokushajwa kabusha. Qinisekisa inkokhelo usebenzisa ikhadi lakho lasebhange noma lesikweletu. Ukushaja kabusha iselula ngekhadi akukaze kube lula kangako.
Ukuze ushaje kabusha ulayini wakho kumakhalekhukhwini wakho, landa uhlelo lokusebenza lwebhange lakho noma iwebhusayithi oyikhethayo, kudivayisi yakho. Uma usufikile kufanele ufake inombolo yakho yocingo, inani ozolishajwa kabusha kanye nemininingwane yekhadi lakho lasebhange.
Izinhlelo zokusebenza zingatholakala ku-App Store noma ku-Google Play ye-iOS nezinhlelo zokusebenza ze-Android.
Gcwalisa amakhadi kuma-ATM
Ukuze ushaje kabusha idivayisi yakho yeselula ngamakhadi kuma-ATM, kodwa okokuqala kufanele uqinisekise ukuthi ibhange linalo yini le sevisi etholakalayo. Kubalulekile ukukhomba lokho akuwona wonke amabhange ane-recharge yeselula ngama-ATM awo.
Futhi, i-ATM ngayinye inezindlela ezihlukene zokushajwa kabusha, bheka ibhange lakho ukuze uthole ulwazi oluhambisanayo. Ngokuvamile, izinyathelo zokushajwa kabusha ikhadi leselula kuma-ATM yilezi:
Faka ikhadi lakho lasebhange ku-ATM
Khetha umsebenzi ozowenza
Khetha inkampani ehlinzeka ngesevisi
Faka inombolo yocingo, okungenzeka kube eyakho noma eyomunye umuntu
faka inani ozolishajwa kabusha
Amakhadi akhokhelwe akuvumela ukuthi ulawule ukusetshenziswa ngempumelelo. Lezi ziza namanani ahlukene akuvumela ukuthi ukhethe inani lemali ofuna ukufaka ulayini wakho weselula
Ukuze ushaje kabusha iselula yakho ngekhadi elikhokhelwa kusengaphambili, lithenge ezitobhini, emahhovisi ezentengiso, ezitolo, ezitolo ezinkulu, njll.
Ukuze usebenzise amakhadi akhokhelwa ngaphambili, bheka ikhodi yokuvula kanye neziqondiso zokushajwa kabusha ngemuva noma shayela u-opharetha weselula yakho ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Phezulu kuselula » Amabhange » Gcwalisa iselula ngekhadi